Nigis - Wikipedia
Boga "kastuumo" halkan ayaa laga soo toosiyay.
Nigis (Af Ingiriis : underwear; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) sidoo kale loo yaqaano Kastuumo, waa nooc ka mid ah dharka laga hoos xirta dhar kale. Nigiska waxaa loogu talogalay in dharka laga hoos xidho, waxaanu leeyahay noocyo badan oo kala duwan kuwaasi oo loogu talogalay raga, dumarka, ciyaarka iyo dadka waayeelka.
Kastuumadu waxay ka mid tahay dharka dadku isticmaalaan taasi oo laga xidho hoosta ama dharka kale hoostooda. Sababta ugu muhiimsan ee nigisku waa inuu ilaaliyo xubnaha khaaska ah ee dadka iyo in wasakhda ka soo baxda jidhka ku ilaaliyo dharka kale ee dusha laga xidhan yahay.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Nigis&oldid=169964"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Luuliyo 2017, marka ee eheed 08:05.